China G550 Galvalume Aluzinc Yakavharidzirwa Steel Coil fekitari nevagadziri |Zhanzhi
G550 Galvalume simbi coil inoumbwa nealuminium-zinc alloy structure, iyo inoumbwa ne55% aruminiyamu, 43.4% zinc uye 1.6% silicon yakasimbiswa pa600 ℃.Iyo yakakosha alloy zvinhu izvo zvinowanzoshandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Galvalume simbi coil ine akawanda akanakisa maitiro: yakasimba ngura kuramba, inova katatu kune iyo yakachena galvanized sheet;Kune maruva akanaka e-zinc pamusoro, anogona kushandiswa sekunze kwezvivakwa.
2.Grade: G550, zvose maererano nechikumbiro chemutengi
8. Coil uremu: zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
9.Alu-zinc coating: AZ50 kusvika AZ180
10.Spangle: nguva dzose spangle, spangle duku, huru spangle
11. Kurapa kwepamusoro: Kurapa kwemakemikari, mafuta, yakaoma, Kemikari kurapwa nemafuta, anti-finger print.
Simbi Type AS1397-2001
Simbi Yekutonhora Kugadzira uye Yakadzika Dhirowa Chikumbiro
CS mhando B, mhando C
Surface T kugadzirisa
kuderedza mukana wehumid-storage staining inoumba yakasviba grey surface discoloration pamusoro
chengetedza kupenya kwesimbi kupenya kwenguva yakareba
kuderedza tsika yehumid-storage stain
Kemikari Kurapa uye Mafuta
Mushonga wemakemikari unopa dziviriro yakanaka kwazvo kubva kune humid-storage staining, nepo oiri ichipa lubricity yekushanda.
inofanira kutakurwa uye kuchengetwa nechenjedzo dzakakosha kuchengetedza hunyoro hwakaderera.
kuderedza mukana wekusvibiswa-yekuchengetedza tsvina inoita rima regrey pamusoro pekushanduka kwemavara pamusoro
*Galvalume Steel inoumbwa ne55% aluminium, 43.5% zinc uye 1.5% Silicon.
*Simbi yeGalvalume inoumbika, inokwenenzverwa uye inopendwa.
*Simbi yeGalvalume ine yemhando yepamusoro corrosion resistance mumamiriro emuchadenga.Izvi zvinowanikwa kuburikidza nekubatanidzwa kwechibairo chekuchengetedza zinc uye chivharo chekudzivirira kwealuminium.
*Galvalume Simbi yekuputira kunze-inoita galvanized coating kubva ka2-6 pane inopisa dip galvanized simbi.
*Isu tinoziva nezvemusika wePhilippine uye tine vatengi vakawanda ikoko